Soo-saareyaasha Alaabooyinka - Warshada waxsoosaarka Shiinaha & alaab-qeybiyeyaal
Mesh gidaarka daahyada ah ee wax lagu qurxiyo ee tolnimada leh ee mesh
Shabakadda dhismuhu waa mid ka mid ah isbeddellada ugu horumarsan ee codsiyada gudaha iyo dibadda dhismayaasha. Waxay bixisaa soo jiidashada naqshadeynta, waxtarka tamarta, waaritaanka alaabta iyo dayactirka hooseeya. U keen xiisaha la xoojiyey ee mashruucaaga xiga adiga oo ku daraya quruxda iyo shaqada dhismaha mesh birta
Mesh giraanta birta ah ee qurxinta ee gaashaanka silsiladda ilaalinta badbaadada
Mesh giraanta birta ah waxaa lagu magacaabaa daahyada giraanta. Waxay ka kooban tahay siddo yaryar oo badan oo cabbirkoodu yahay 3.85mm-30mm. 304/316 birta aan la taaban karin, birta galvanized, naxaasta iyo qalabka naxaasta ayaa ku habboon mesh isku xirka silsiladda. Mesh giraanta ah ee birta ah ayaa ah tan ugu caansan suuqa caalamiga ah.
Qurxinta muraayadda birta ah ee dahaadhay mesh silig qurxin ah
Mesh Qurxinta dhalada ah, mesh muraayadda hudheelka ah ee muraayadda leh ayaa si weyn loogu isticmaalaa qurxinta gudaha iyo dibadda ee wejiyada, darbiyada daahyada, qaybaha, saqafka, muraayadaha qorraxda, balakoonada, waddooyinka iyo jaranjarooyinka saldhigyada garoonka diyaaradaha, hudheelada, matxafyada, guryaha opera, garoomada, sare- soo afjaro dukaamada caanka ah ee caanka ah, kafateeriyada, meelaha laga dukaameysto, filooyinka, hoolalka riwaayadaha, dhismayaasha xafiisyada, hoolalka bandhigyada, xarumaha ganacsiga iyo dhismayaal kale.
Dheeman balaariyay mesh aluminium ah oo loo adeegsaday qurxinta dhismaha
Mesh ballaadhinta biraha waa nooc ka mid ah godka godka ee qaabaysan mesh dusha sare ee la sameeyay iyadoo la adeegsanayo taarikada birta ah ee la heli karo sida birta galvanized, copper, aluminium, aluminium aluminium iyo birta aan lahayn, kaas oo la ballaariyay laba ilaa toban jeer dhererka asalka ah ka dib daaweynta farsamada farsamada gaarka ah. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa soo saarista mishiinada, qurxinta gudaha, darbiga daahyada birta, wax soo saarka alaabta guriga iyo beeraha kale.
Saxan aluminium dalool ah oo loogu talagalay qurxinta gidaarka daahyada
Saxan aluminium dalool ah ma aha oo kaliya sheyga ugu weyn ee qurxinta derbiga daahyada casriga ah, laakiin sidoo kale walxo cusub oo qurxinta,
Saxanka aluminium ee daloolku wuxuu buuxin karaa sifooyinka qaabka derbiga dibadda ee dhismaha wuxuuna dadka ka dhigaa mid soo kabanaya noocyo kala duwan oo kala duwan.
Qurxinta qaab dhismeedka gudaha ee birta aan fiicnayn ee mesh silig togan
Mesh-ka tidcan-dhismaha waxa kale oo loo yaqaan mesh-tidcan-qurxinta, kaas oo inta badan ka samaysan bir-xumo, aluminium, naxaas, naxaas iyo agabyo kale oo loogu talagalay naqshadaynta alaabta, mararka qaarkood ku habboon codsiga.
Daboolka qaboojiyaha aluminiumku waa qalab ilaalin dibadeed oo qaboojiyaha. Alaabadayada waxaa loo qaabeeyey oo lagu soo saaray gudaha si waafaqsan heerarka adag. Alaabadayada waxaa loo habeeyey macmiil kasta si uu u buuxiyo shuruudaha gaarka ah ee macmiil kasta.
Nidaam kasta oo gaar ah oo ShuoKe mesh bir ah oo lagu qurxiyo waa shaqo farshaxan sideeda u gaarka ah, looguna talagalay joomatari gaar ah, meelo furan, cabbirro, iyo dabacsanaan. Waxa ay sameeyeen farsamoyaqaanno xirfad leh oo ka kala yimid noocyo kala duwan oo bir ah oo aad u adkeysi badan balse si fudud dib loo warshadayn karo, oo ay ku jiraan birta aan-ka-baxa lahayn, naxaasta, aluminiumka iyo naxaasta, ka samaysan birtu waa qalab dhisme oo waara.
Astaamaha daahyada mesh birta:
Waara, iftiin iyo waara
Debecsanaan - dhimi oo ku fidin hal jiho
Gaar ahaan - loo sameeyay cabbirkaaga
Mesh qurxinta saqafka saqafka aluminium
Waxaan ku siin karnaa go'an dhammaystiran ee qurxinta gudaha ee gidaarka mesh daahyada / saqafka
Iyo qurxinta dibadda ee dhismayaasha horumarsan, sida daahyada, saqafka, jaranjarada,
Wiish, dhismayaal xafiisyo lagu raaxaysto, hoteello, hoolal waaweyn oo lagu caweeyo, goobo ganacsi, iwm
Duubista iyo dharbaaxada isku dhafan ee jilicsan ee Rigi, mesh silig ayaa si ballaaran loogu isticmaali karaa warshadaha qurxinta si loo abuuro saameyn kasta oo naqshadeeyayaasha ay ku riyoodaan.
Mesh birta fiilada ah waa nooc ka mid ah mesh birta ah ee qurxinta.
Mesh birta fiilada ah waxay ka kooban tahay fiilooyinka birta tidcan iyo biraha birta ah.
Caadiyan dagaalku waa xadhig bir ah, dunduhuna waa ul bir ah.
Waxaan ku takhasusay ganacsiga iyo deegaanka, gudaha iyo dibadda xal qurxinta.
Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo ah muraayadaha qurxinta ee cabbirka caadiga ah waxaanan awoodnaa in aan habeynno cabbirrada kala duwan ee muraayadaha qurxinta si loo daboolo baahiyahaaga. Iyadoo in ka badan 3,000 oo naqshado kala duwan laga dooranayo, waxaad hubin kartaa in nashqadahayadu ay ku habboon yihiin gurigaaga, ganacsigaaga ama beertaada; Dabaqyadan waxa loo habayn karaa: farshaxanka beerta, qolqolka qaybisa, gidaarada dahaarka, dayrarka gaarka ah, saqafka, saqafka xayndaabka, qalabka nalka, albaabada, muraayadaha birta daxalaysan ee dabiiciga ah, biraha birta ah ee daxalaystay, biraha birta ah, calamadaha shirkadaha/ganacsiga, dukaanka, hudheelada iyo baararka.
1234 Xiga > >> Bogga 1/4